Momba anay - Shenzhen Xinyuanjiaye Technology Co., Ltd.
SHENZHEN XINYUANJIAYE TECHNOLOGY CO., LTD dia naorina tamin'ny taona 2011 ary hita ao Shenzhen, tanàna tsara tarehy amoron-tsiraka. Izy io dia mpanamboatra saron-tava matihanina amin'ny famokarana saron-tava 1,5 tapitrisa isan'andro. Iray amin'ireo mpanamboatra masobe lehibe indrindra any Chine Atsimo. Ny fototra dia hita ao amin'ny Masha Xuda High-tech Industrial Park, No. 49 Road North North Road, Gaoqiao Community, Pingdi Street, Longgang District, Shenzhen.
Ny vokatra dia misy: saron-tava fiarovana azo antoka, saron-tava fitsaboana azo antoka, saron-tava mifono (KN95), sns., Mandrakotra ny fikarakarana ara-pahasalamana, indostrian'ny sakafo sy ny simika, fitaovana elektronika, indostria simika tsara sy ny indostria hafa mifandraika amin'izany, izay nahazo ny fiderana narahin'ny olona manan-tsaina ny indostria. Ny vokatra dia vokarina mifanaraka amin'ny fenitra an-trano sy iraisam-pirenena mifandraika, ary ny vokatra aondrana no mahafeno ny fepetra fanamarinana ny EU CE sy ny US FDA.
Amin'ny maha-marika vaovao anay indrindra ny indostrian'ny saron-tava, dia manana efitrano madio 100 000 sy fitaovana manamboatra fandrosoana izahay, fitantanana orinasa ary manome ny mpanjifa vokatra avo lenta sy maharitra. Navoaka any Eropa, Afrika, Canada, Japon, Azia atsimo atsinanana ary ireo toeran-kafa ny vokatra